I-Ukraine ifuna ukwakha isitshalo sokukhiqiza ama-fries aseFrance - Umagazini wamazambane
Njengoba kubikiwe I-AgroPortal.ua, UPotato Agro, othengisa amazambane ngaphansi kophawu lweBESTPOTATO, uhlela ukwethula owakhe umsebenzi wokuhlunga ngonyaka olandelayo.
"Lokhu kuzoba ngowokuqala noma omunye wefektri yokuqala yokwenziwa kwama-fries aseFrance e-Ukraine," kusho uKonstantin Sarnatsky, iBusiness lead kanye ne-CEO uPatato Agro.
Isitshalo iLam Weston Belaya Dacha siqale kabusha umsebenzi waso
McCain utshale ama-ruble ayi-12 billion. ekwenziweni kwama-fries aseFrance esifundeni saseTula
Kuze kube manje, amacebo acindezelwa yisimo esihlobene nokusabalala kwe-coronavirus, kuchaza uSarnatsky. Uma izindlela zokuhlukaniswa yedwa zingazange zithinte izinqubo zokukhiqiza, izinhloso zamasu seziye zalungiswa.
“Sidinga ukuhlela ukwakhiwa, sithole ochwepheshe, futhi konke ukuxhumana kuvalwa. Kunzima ukukhuluma ngokubambisana okukhulu, ”kunezela uSarnatsky.
Uyaphawula ukuthi inkampani manje isinikeza amazambane ngaphansi kwenkontileka yangaphambili yokucutshungulwa kuma-chip. Amahektha angama-400 ezinkundla asetshenziselwa lokhu.
Elinye ihektha angama-400 libekelwe eceleni amazambane, angahlungwa libe ngama-fries.
Ngasekuqaleni konyaka olandelayo, yonke indawo engaphansi kwamazambane kufanele ibe ngaphezu kwamahektare ayinkulungwane. Ngokuvamile, iPotato Agro ihlela ukukhulisa ibhange layo lomhlaba ngamaphesenti angama-1000-40 ngonyaka.
Tags: ukucubungula amazambaneUmkhiqizo wama-fries waseFranceUkraine